A Klever Ileta nguDio Ianakiara | Klever ezezimali
Ukwenzela i Klever Uluntu, abaThengi kunye nabaSebenzisi.
Bendihlala ndikholelwa ukuba ukhuseleko lucelomngeni olukhulu kungekuphela nje kwi-cryptocurrency kodwa nakwilizwe lokwenyani. Kukho ubuqhophololo kuyo yonke indawo.
Umngcipheko wokulahlekelwa kolawulo lwamathokheni kunye nempahla yakho iphezulu ukuba wabelana ngesitshixo sakho esiyimfihlo kunye nenkonzo ephazamisekileyo okanye isikhwama.
Abantu abaninzi, ngelishwa, balahlekelwa ZONKE ii-asethi zabo ngenxa ye-wallets kunye neenkonzo ezilahlekileyo. Xa izitshixo eziyimfihlo zabelwana ngazo ngaphandle kwendlela ekhuselekileyo yokugcina kunye nokusayina iintengiselwano, umsebenzisi uya kuhlala ebeka umngcipheko wokuphulukana nazo zonke ii-asethi zabo.
Emva kokuba ndifumene le nto ngo-2017, ndifuna ukudala indlela ekhawulezayo, ethembekileyo, nekhuselekileyo yokusayina izivumelwano kunye nokuthengiselana kwi-blockchain, kunye namava amangalisayo omsebenzisi. Ukuba nguMyili weSoftware onamava angaphezulu kweminyaka eyi-12 kunye nokuhambisa ngaphezulu kweeprojekthi ze-100 ngelo xesha, bendisazi ukuba ukwakha i-wallet ye-cross-chain kuya kuba ngumngeni, kodwa bendiqinisekile ukuba singayenza!
Emva kokumiliselwa kwe Klever app ngo 2018, isipaji-chain enye yaba isipaji crypto multi-chain kunye nenkxaso phezu 30,000 iimpawu ngapha 20+ blockchains. Oku kubonise umngeni omtsha kraca - Phuhlisa iprotocol entsha ye-blockchain ukuxhasa izicelo zethu.
Ngo-2021, siya kube sikhonze ngaphezulu kwe-3.5 yezigidi zabathengi, sirekhode ukukhula kwengeniso nge-2,774% ukuya ngaphezulu kwe-11,000,000 yezigidi zeedola, kwaye sandise isabelo sethu semarike ngaphandle kokhuphiswano olundlongo.
Klever ikhule ngokukhawuleza kwiminyaka yayo emine yokuqala kwaye ngoku inabasebenzisi abangaphezu kwezigidi ezi-3.5 kwihlabathi liphela. Ixabiso lethu lokwenyani linokufunyanwa kwinto yokuba siyakwazi ukunceda abasebenzisi bethu ngokukhuselekileyo bakhulise ukuzithemba kwabo kwezoqoqosho kwaye baphinde bafumane inkululeko yabo yezemali.
Namhlanje, sinomlinganiselo we-4: 1 phakathi kwemali esiyifumanayo kunye nesichithayo, nto leyo ngokungathandabuzekiyo ililungelo ngamaxesha obunzima bemali behlabathi obufana nale sijongene nayo ngoku. Klever inabasebenzi abangaphezu kwe-160 kunye nabasebenzi, nto leyo eyenza ukuba ibe yenye yezona ziqalo ze-crypto ezikhula ngokukhawuleza kwihlabathi.
Okokuqala ebomini babo, abantu ngokwenene banemali yabo kwaye banokuzimela ngokuzimeleyo ukuba benze ntoni ngemali yabo. Ukukhuselwa kwale nkululeko yemali kunye nenkululeko yokuzikhethela ziintsika ezibumba Kleverifilosofi kunye nomsebenzi.
Klever Ingqekembe (KLV)
Siyaqhubeka nokukholelwa ukuba ukuba nethokheni eluncedo enika amandla zonke iimveliso kunye neenkonzo zethu kuzisa intembeko, ubuchule, uxanduva, kunye nokuzimela kubasebenzisi bethu. Yomeleza ubudlelwane bethu noluntu lwethu kwaye yenza izivumelwano zobudlelwane eziguqukayo. Zonke iintengiselwano zenziwe kwipotfoliyo ye Klever Iiapps zidlula kwi KLV ingqekembe, ngokuthe ngqo okanye ngokungathanga ngqo.
KLV likhonkco phakathi kwabasebenzisi bethu kunye neemveliso kunye neenkonzo kwipotfoliyo. Ngenxa yoko, siya kuqhubeka nokusebenza nzima ukuphucula eli khonkco, kuba le yeyona nto idibanisa nabasebenzisi bethu kwaye yakha inkqubo yendalo.
Klever Imali, KLV, yasungulwa kwiminyaka emibini kuphela edlulileyo, kodwa ikhule ngokukhawuleza kunye nabanikazi abangaphezu kwe-175,600 abaye baqhuba ngaphezu kwe-12,2 yezigidi ze-blockchain transactions kunye KLV.
KLV's market cap idlula $200 million.
Kunyaka ophelileyo, KLVIxabiso lika-'s lixabiseke nge-918.7% kulandela i-spike enkulu ngoFebruwari 2021, kwaye ngoku kufanelekile $0.035.
Sitshisa isixa esibalulekileyo ngonyaka KLV Disemba nganye ngokusekelwe kwingeniso evela Klever Ukutshintsha kunye neminye imithombo yengeniso yonyaka odlulileyo. Iyonke malunga ne-5B KLV amathokheni aya kutshiswa kwaye asuswe kunikezelo lulonke ngale ndlela.
Ezinye zazo zimalunga neebhiliyoni ezi-5 KLV eziya kutshiswa kule minyaka imbalwa izayo zivela ezisanda kwenziwa KLV yenziwe nge Klever Staking. Amazinga okunyuka kwamaxabiso ezinto ezintsha KLV zezi zilandelayo: ekupheleni kuka-2020 yayiyi-12 %, 2021 ~ 10 %, 2022 ~ 8 %, 2023 ~ 6 %, 2024 ~ 4 %, 2025 ukuya phambili 2%.
Klever izama ukufikelela imodeli deflationary ngenxa KLV, apho ukutsha konyaka kwe KLV iveliswe ngu Klever's gross ingeniso kunye apps ziya kudlula unikezelo esanda kwenziwa KLV yenziwe ngestaking kunye nokuqinisekiswa kwe node.
Klever utshise izigidi ezingama-317,178,337 KLV nge-30 kaDisemba, emele malunga ne-5.7% ye KLV's unikezelo olujikelezayo.
Ngokwexabiso lanamhlanje le KLV, itshisiwe KLV imali ingaphezulu kwe-11 yezigidi zeedola ngokusekelwe KleverIngeniso epheleleyo ngo-2021.
I-hash yentengiselwano yokutshisa ye-317,178,337 KLV iyafumaneka ngokucofa iqhosha elingezantsi:
KLV Tshisa iNtengiselwano
Kunyaka ngamnye, i Klever Iqela libala ingeniso yalo nyaka uphelileyo lize lithathe KLV ukusuka kunikezelo olujikelezayo lomqondiso kwixabiso elilinganayo le-USD.
Klever's ingeniso kunye nokusetyenziswa kwe Klever Ukutshintsha kunye Klever Iimveliso ze-ecosystem kulindeleke ukuba zonyuke kule minyaka izayo, nangonyaka KLV ukutshisa kuya kukhula kunye nayo, njengoko kungqinwa kukwanda konyaka-ngonyaka ukusuka ku-2020 ukuya ku-2021.
egqithileyo KLV Burns
Ngaphambi kwezigidi ezininzi zeedola zanamhlanje KLV tshisa, Klever ebeqhuba ukutshisa okune kwemihla ngemihla suku ngalunye, esusa ngakumbi KLV ukusuka kunikezelo. Ekupheleni kuka-2020, i Klever Iqela litshise lilonke 35,941,960 KLV, ngaphandle kokutsha kwanamhlanje kwe-317 yezigidi KLV.
Klever Isiseko sibeke kwi-1,011,321,662 KLV ukwandisa ukwenziwa kwezinto elubala nge-30 kaDisemba.
Emva kokutsha, KLVUbonelelo olujikelezayo ngoku lumi kwi-5,224,423,694 KLV, ngaphezu kwe-74% ebanjwe ngaphakathi Klever app, efikelela kwi-3,874,795,563.967275 iyonke KLV engumkhenkce kwaye ebekwe ngamawakawaka Klever abasebenzisi kwihlabathi liphela.
Klever block Chain
Ukwenzela mna, KleverIkhonkco yinto enkulu elandelayo kwi-crypto kuba iya kwenza kube lula kwaye kucace kubaphuhlisi ukwenza i-crypto kunye ne-blockchain izicelo.
Klever Blockchain okanye KleverIkhonkco yinethiwekhi ethembekileyo ye-blockchain ethembekileyo kuqoqosho olusakhulayo, ngokubonelela ngamava akhuselekileyo, akhawulezayo, kunye nolwazi lwe-cryptocurrency kubo bonke abasebenzisi kwihlabathi liphela ukuba bangene kwaye baphumelele ngaphakathi.
Njengesiphumo seqela lethu leenjineli kunye nomsebenzi we-blockchain wizards, Klever yiprojekti idibanise i KleverChain Public Testnet kumsebenzi wayo ongundoqo.
Iinyanga ezimbini ezidlulileyo zinike abasebenzisi bethu amathuba okuvavanya, ukuhlalutya, kunye nokubonelela ngengxelo njengoko singena kwinqanaba elilandelayo Klever's eyakhe blockchain ngendaleko.
KleverIsango lekhonkco le-blockchain (KleverScan) yenziwe ngokutsha kwaye yalungiselelwa ukusebenza, ingenamthungo, kunye namava asebenziseka lula kubasebenzisi. Izihluzi zayo ezongeziweyo kunye nokufikelela okukhawulezayo kwimibono yentengiselwano kuyenza ibe sisixhobo esibalulekileyo xa usebenzisana neempawu eziphambili, ezinje ngeeNodi, iibhloko, iiAkhawunti, ii-Asethi, kunye neeNtengiselwano: https://testnet.kleverscan.org
Ngo-2022, siza kubonisa itekhnoloji yethu ye-blockchain yokumisa umhlaba.
Kapps Iyeza kunekudala
Klever Umqondiso woLawulo (KFI)
The Klever Umqondiso weMali (KFI) Ingaba i Klever Blockchain Isicelo ulawulo uphawu. KFI abanini bethokheni banolawulo olupheleleyo kuqwalaselo lweprotocol ye-app (njengemirhumo yesicelo kunye nokudluliselwa) kunye nokwamkelwa kosetyenziso olutsha olusebenzisa inkqubo yokuvota kwikhonkco.
Ukucacisa, KLV Ingqekembe yi Klever ithokheni engundoqo yeBlockchain, kunye KFI luphawu lolawulo lwe KleverItyathanga. Klever I-Blockchain isenza sikwazi ukwakha usetyenziso olungenasiphelo kwikhonkco loontanga ukuya koontanga. Iprothokholi nganye yikapp kunye nemodeli yegalelo layo lomrhumo kuthungelwano ngokwalo nakwi KFI uluntu lolawulo. Njengoko usetyenziso oluninzi luphuhliswa kwi Klever I-Blockchain, ixabiso elithe kratya lihamba lingena kumachibi ombane KLV kunye nemivuzo engaphezulu isasazwa kwi KFI uluntu lolawulo.
Ungayisebenzisa KFI on Klever I-Blockchain ukuvotela iziphakamiso zesicelo esitsha, ivoti kwiiprojekthi ezintsha, ivoti kwizicelo zotshintsho, ufumane umvuzo we-kapp womnatha.
Njengoko uninzi lwenu lusazi, emva kohlalutyo olongezelelweyo siye sagqiba ekubeni sandise i KFI ubonelelo ukusuka 1M ukuya 21M iiyunithi. Kukho izizathu ezibini eziphambili zoku. Isizathu sokuqala kukuba inani labanikazi bamathokheni liphantsi kakhulu kwithokheni yokulawula. Isizathu sesibini kukwandisa ixesha lokumbiwa kwemigodi kunye nemivuzo kubo bonke Klever iimveliso ezivumela kwi-chain kunye ne-off-chain apps ukuya kum KFI.
Emva kokuqaliswa kwe-blockchain, KFI Abanini baya kutshintsha umsinga KFI uphawu kunye nomlinganiselo 1:21 ukuya entsha KFI inguqulelo xa sifudukela kwi Kleveritsheyini.
Funda i KFI Iphepha elimhlophe apha
Itekhnoloji yokwakha utshintshiselwano kunye ne-wallet ebesicinga ngayo ibingekabikho nakweliphi na iqonga, ke kuye kwafuneka ukuba siyile kwaye siyikhowudi yonke into ukusuka ekuqaleni kwaye kulapho ulonwabo lwaqala khona!
Ukususela ekuqaleni kwayo, Klever Shintsha ibonise ukusebenza okusisiseko kwabo baqalayo kunye nabarhwebi abanamava. Sakhe isiseko sobugcisa ukuze silinganise iinkonzo zethu ukuze sikwazi ukunika iimpawu ezinamandla nezifanelekileyo kumntu wonke ngokusekelwe kwisiseko ukhuseleko, ukusabalala, ukuthembeka, kwaye isantya esihamba phambili kwimarike.
Klever Utshintshiselwano lumisela isicwangciso esinqwenelekayo sokwenza ukurhweba crypto lula, yonwabile, kwaye ifikeleleka kubo bonke, kwaye ijolise ukuthabatha ihlabathi le-crypto lilise kwinqanaba elilandelayo. Ukuphehlelelwa kwe Klever Utshintshiselwano lutshintsho lomdlalo kuyo yonke inkqubo yendalo kunye nokuqinisekisa ukuba iba ngamava anamandla ngo-2022, sigqibe kwelokuba sivavanye, sakhe ngakumbi, kwaye sigqibelele ikhowudi yethu kulo nyaka.
Ukuphehlelelwa kwemarike yethu entsha ye-NFT ye-multichain Klever Utshintshiselwano luya kwenzeka nge-17 kaJanuwari 2022, isiqalo soluhlu lwenkqubela phambili entsha yezobuchwepheshe eya kuguqula indlela esirhweba ngayo, ukugcina nokulawula izinto zethu zedijithali.
Kwakhona siya kuba neqonga lethu lequla lokusebenzisa amanzi, elibizwa Klever Iphuli, eya kubonelela ngemali yokuhlawula amatyala Klever Utshintshiselwano kunye nezinye Klever iimveliso.
Klever Isikhangeli seHardware
The Klever I-Wallet ye-Hardware iya kutshintsha ngonaphakade indlela ojonga ngayo ukhuseleko lwe-crypto, ukugcinwa, kunye nolawulo lwe-asethi yedijithali. Isiphumo seenyanga zophuhliso kunye nokugqibelela, i Klever I-Hardware Wallet iqhayisa ngokukhuselekileyo, ukujikeleza okunamandla kunye noyilo oluphucukileyo.
Ngaphezulu nje kweyure ezimbini, ukuthengiswa kwethu kwangaphambili Klever Izipaji zeHardware zathengiswa zaphela. Xa uluntu lwakho luzibophelela ekuthengeni imveliso yakho entsha neyokuqala yomzimba, uyazi ukuba unento ekhethekileyo.
Klever I-Hardware Wallet yayifumaneka ngaphambili nge-129 yeedola ngeyunithi, ngaphandle kokuthumela, kwaye ngoku iyafumaneka nge-199 yeedola ngeyunithi.
Klever I-Hardware Wallet ikuvumela ukuba ugcine, ulawule, kwaye urhwebe ngemali yedijithali ngokukhuselekileyo usebenzisa ugcino olubandayo nge-USB-C okanye uqhagamshelo lweBluetooth. I-high-grade, i-CC EAL5 + eqinisekisiweyo yesekethe edibeneyo ibambe isitshixo sabucala esisetyenziselwa ukwenza imisebenzi ye-cryptographic, eyenza isixhobo sibe lula ukuseta kwaye kulula ukuyisebenzisa.
Enye yezona zinto zinomdla kakhulu kwi Klever I-Wallet ye-Hardware kukuba iyafikeleleka ngongqamaniso Klever I-Wallet app, ibeka ukhuseleko ngakumbi embindini wayo nayiphi na i-crypto transaction. Ngokwenza njalo, i Klever I-Wallet app iyafuneka ukuba iqhagamshelwe kwisipaji sehardware kwaye ngokuphendululekileyo. Ngaloo ndlela, i Klever I-Hardware Wallet ibonelela ngonxibelelwano lomsebenzisi olunobuhlobo ngakumbi kunye namava angcono omsebenzisi anokhuseleko oluphezulu lwe-wallet kunye neemali zomsebenzisi.
Ngokucacileyo, nawe ufumana ukufikelela KleverIqela lenkxaso elaziwayo le-24/7 lokuqinisekisa ukuba amava akho eWalethi yeHardware awanamthungo, ayakhawuleza, kwaye ayinamnyhadala.
Nje ukuba amaqela ethu ophuhliso lwemveliso kunye nokubonelela ngempahla agqibe isitokhwe sethu, siya kuqalisa ukulungisa iintlawulo kwaye kuya kuqalisa ukuthunyelwa.
Klever I-Wallet ikwi-trajectory engenakunqandeka, kwaye iya kuhamba ukuya Klever 5. Le nguqulo entsha ibonakalisa uyilo oluphucukileyo nolusebenziseka lula, kwakunye nophuculo olunxulumene nokusebenza kunye nokusebenziseka.
Ngo-2022, indibaniselwano yethu entsha kunye nentsebenziswano iya kubandakanya:
I-Hardware Wallet uQhagamshelwano
Le yimizekelo nje embalwa, izinto ezininzi ezivuyisayo ezizayo.
Yiloo nto kanye esiyenzileyo kulo nyaka. Sifezekise iinjongo ezininzi kwaye sahambisa itekhnoloji ekumgangatho wehlabathi. Sichithe unyaka ophelileyo sisenza, sikhulula, kwaye sigqibelelisa KleverI-ecosystem, ukuyilungiselela uluntu lwethu, kunye nokwakha i-hub yetekhnoloji eyilelwe ukukunceda ufumane inkululeko yezemali.
#KleverI-2022 iya kuzisa ukuhlanganiswa kwe Klever itekhnoloji, imisebenzi yokuthengisa ephucukileyo, kunye nokuqaliswa kwezethu KleverIkhonkco, siya kutshintsha ihlabathi le-blockchain.
Jonga i-AMA yethu
I-CEO kunye noMseki we Klever
Akukho kalo 4.86 Iivoti: 120